Crystal Mvura feminized | MyWeedSeeds.com
Crystal Mvura yakasimudzwa
Crystal Mvura inodzora mukadzi mbanje (yakahwina mukombe we2002 Upenyu Mukombe) ndiwo muchinjikwa weWhite Chirikadzi ine mukurumbira uye nembiri yekuNorth Mwenje mbanje. Akagara nhaka hunhu hwese hwemhando mbiri - kugona kuburitsa chirimwa chakakura kubva kuNight Lights uye yakakwira THC yekugadzira nhanho kubva kudivi reWhite Chirikadzi yemhuri. Crystal Mvura ipfupi uye izere mbanje chirimwa. Mabukira ake akakura uye, sekutaurwa kwazvinoitwa nezita rake, akaremerwa neTHC gland (makristasi) uye nevhudzi rakachenuruka. Anofara kukura mumba, asi anoenderana nemamiriro ekunze uye magirinhi. Pakazara, ari nyore kurima kupfuura Chirikadzi Chena, asi iye achiri kuda kuchengetwa uye nehunyanzvi hwekukura hunyanzvi. Kunhuhwira kwake ndokwekurangarira uye kunotapira kwakasarudzika, uye iye anopa rinenge rinenge pakarepo kukwirira.